We.com.mm - သက်ကြီးရွယ်အိုသခင်အတွက် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဈေးဝယ်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ခွေးလိမ္မာလေး Nino
သက်ကြီးရွယ်အိုသခင်အတွက် ကိုဗစ်ကာလအတွင်းဈေးဝယ်ဖို့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့ ခွေးလိမ္မာလေး Nino
6 days ago by Katie Scarlett
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ၊ Bogota က “Nino” လို့နာမည်ရတဲ့ခွေးလေးဟာ သူနေထိုင်ရာအရပ်ဒေသမှာ နာမည်ကျော် လေး ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ သူဟာ ကိုရိုနာကူးစက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာ သခင်ဖြစ်သူ အတွက် အစားအသောက်ဝယ်ယူပေးတဲ့တာဝန်ကို ယူခဲ့တာကြောင့်ပါပဲ။
Nino ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Jose Ever Hanao ဟာ အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကြောင့် ကိုဗစ်ကာလအတွင်း လုံးဝ အပြင်မထွက်သင့်တဲ့သူတစ်ဦးပါ။ သူ့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအတွက် လူတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ချပြီး ရောဂါမဖြစ်အောင် အိမ်မှာပဲနေရပါတယ်။
အဲဒီလိုအကြောင်းအရင်းတွေကြောင့် ခွေးလိမ္မာလေး Nino ဟာ Jose အတွက် အစားအသောက်အဝယ်တော် လေး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဈေးဝယ်ဖို့လိုအပ်လာတဲ့အခါ Jose က ဈေးစာရင်းနဲ့ပိုက်ဆံကို ခြင်းတောင်းထဲထည့် ပေးလိုက်ပြီး Nino လေးက ခြင်းတောင်းလေးကိုကိုက်ပြီး သွားနေကျဈေးဆိုင်ကို ပြေးဝယ်ပေးပါတယ်။
အကြောင်းသိနေတဲ့ ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်ကလည်း Nino လာပြီဆိုရင် ဈေးစာရင်းအတိုင်း ခြင်းတောင်းထဲကို ပစ္စည်းတွေထည့်ပေးပြီး ကျသင့်သလောက်ပိုက်ဆံကိုယူထားလိုက်ပါတယ်။ ပစ္စည်းစုံတာနဲ့ Nino ဟာ အိမ်ကို တန်းတန်းမတ်မတ် ပြန်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ ခြင်းတောင်းထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ စားစရာတွေကို လုံးဝ ထိလေ့မရှိပါဘူး။
အဲဒီအကြောင်းကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Jose က ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုကို ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Nino ဆိုတဲ့နာမည်ဟာ စပိန်ဘာသာနဲ့ဆိုရင် ကလေးလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Jose ဟာ Nino လေးကို သူ့အတွက် ကလေးတစ်ယောက်လိုသဘောထားတာကြောင့် အဲဒီလိုနာမည်ပေးခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
Nino ဟာ Jose ဆီမရောက်ခင်က ပန်းခြံထဲမှာစွန့်ပစ်ခံထားရတာပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ Jose က ခေါ်ယူမွေးစား ပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။ Nino ကို ခြင်းလေးကိုက်ပြီးဈေးဝယ်တတ်အောင်လည်း Jose ကပဲ အပျော်သဘော နဲ့ သင်ပေးထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ သူ့လို သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ဦးအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဒေသခံတွေရဲ့အဆိုအရ Nino လေးဟာ ဈေးဝယ်ခြင်းတောင်းကို သူ့ပါးစပ်နဲ့ ဂရုတစိုက်သယ်ဆောင်လေ့ရှိပြီး သူ့တာဝန်ကို ကောင်းကောင်း သိပါတယ်။ အဲဒီအနားဝန်းကျင်က လူအတော်များများဟာလည်း သိတတ်လိမ္မာ ပြီး တာဝန်သိတဲ့ခွေးလိမ္မာလေး Nino ကို ချစ်ကြပါတယ်။
Original Link: https://9gag.com/gag/aeDQpMQ?fbclid=IwAR2jQULBq_94mJgR_Zl33kePTB1lg4sYkcKvwPwB_Afrrb8ZLppe9ilvZsY
MAMA 2017 မှာ EXO နဲ့ BTS ဘယ်သူဆုအများဆုံးရမလဲ?
2NE1 အဖွဲ့ကွဲသွားပြီးနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအနေနဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Park Bom ရဲ့Teaser
SELFIE 101: Selfie ပုံလှလှလေးတွေရအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ???
သင့်ကိုအိပ်မက်ထဲအထိ ခြောက်လှန့်နေမယ့် တရုတ်နိုင်ငံကတစ္ဆေ ( ၅ ) မျိုးအကြောင်း
ဖွေးဖွေး အကောင့်ပြဿနာကြောင့် ပိန်းဥတူးခံလိုက်ရသူများ
လက်ထပ်ပြီးခါစ ဇနီးအပေါ် စိတ်ဆိုးရာမှ ပါးစပ်အတွင်း အက်စစ်များ လောင်းထည့်
တစ်ပတ် အလုပ် ၃ ရက်ပိတ်ပြီး လခကိုတော့ ပုံမှန်အတိုင်းရမယ့် အခွင့်အရေး ဂျပန်မှာ အကောင်အထည်ဖော်